Adobe Bridge Free ary ara-dalàna
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Adobe Bridge maimaimpoana
By Eva Williams, Mathis Ravatomanga 2022-05-15, Malagasy Blog
Raha te hanana mpitantana loharanom-pahalalana matanjaka ianao mba hahamora ny asanao amin'ny rakitra, dia ho tonga lafatra ho anao ny Adobe Bridge maimaimpoana. Noho ny fanampiany dia ho afaka hijery, handamina, hanitsy ary hizara loharanon-karena famoronana ianao. Eto aho dia hilazako aminareo rehetra momba an'ity rindrambaiko ity ary hampianariko anao ny fomba fampidinana azy maimaim-poana.
Aza tonga amin'ny fehin-kevitra fa tsy misy fomba hahazoana maimaimpoana, navoakan'ny Photoshop ny fomba ofisialy. Nanomana torohevitra mahasoa maro momba ny fomba hahazoana Photoshop maimaim-poana aho nefa tsy manimba ny asan'ny fanovana sary manan-danja.
Tombontsoa amin'ny Adobe Bridge:
Famaritana afovoany misy lokony
Fanodinana batch azo atao
Mora ny manondrana sary
Manohana Retina sy HiDPI dia miseho miaraka amin'ny fiasa fanitsiana
Tsy sarotra ny mampakatra sary ao amin'ny Adobe Stock
Fandaminana haingana sy fametahana sary panoramic sy HDR
Inona ny atao hoe Adobe Bridge?
Adobe Bridge dia mpitantana rakitra izay manana tahiry afovoany ary maro ny asa fanovana batch. Amin'ny fampiasana an'ity rindrambaiko ity dia azonao atao ny manangona ny fotoananao ary manamora ny asanao amin'ny fisie.
Ahoana no ahafahanao mampiasa Adobe Bridge?
Ity rindrambaiko ity dia ilaina ho an'ny mpaka sary sy mpamorona horonan-tsary famoronana satria manampy azy ireo hitantana ny fananany ara-maso haingana sy ara-kalitao. Araka ny efa nolazaiko teo aloha, Adobe Bridge dia mamonjy fotoana betsaka ary mamela anao hahita rakitra haingana. Ary koa, manana fiasa fanampiny vitsivitsy izy, ao anatin'izany ny fisintomana rakitra amin'ny Adobe Stock sy Adobe Portfolio ary ny fanafarana rakitra avy amin'ny fakan-tsary sy fitaovana finday.
Tohin'ny Review and hahafantatra bebe kokoa momba Maimaimpoana ny Adobe Portfolio.
Ohatrinona ny vidin'ny Adobe Bridge?
Na dia azonao atao aza ny mahazo an'ity rindrambaiko ity ho fividianana misaraka tanteraka maimaim-poana, dia zara raha manao izany ny mpampiasa. Ny anton'izany dia ny antony nananganana azy indrindra hiasa amin'ny programa Adobe ary, avy eo, tafiditra ao amin'ny drafitra Adobe Creative Cloud. Ity drafitra ity dia mitentina $ 52,99 isam-bolana raha mividy azy mandritra ny herintaona sy $ 79.49 - raha mividy azy io ho toy ny fividianana indray mandeha.
Jereo bebe kokoa momba ny Maimaimpoana ny Adobe Creative Cloud.
Misy fihenam-bidy ho an'ny mpianatra / mpampianatra ve?
Eny, misy fihenam-bidy 60% ho an'ny fianakaviana mpangataka CC iray manontolo!
Aiza no hianarana Adobe Bridge?
Afaka mahita fampianarana marobe amin'ny Internet ianao mampianatra anao ny fomba fampiasana an'ity rindrambaiko ity ho toy ny ampahan'ny drafitra fandalinana ahitana ny ankamaroan'ny kilasin'ny Creative Cloud. Misy taranja misaraka, izay tafiditra ao amin'ny Creative Cloud ihany koa, manazava ny fomba fiasa amin'ny programa tsirairay.
Ianaro ny fomba hahazoana Fihenam-bidy Adobe Creative Cloud.
Fa maninona no mampidi-doza ny fampiasana ny kinova triatra an'ny Adobe Bridge Free?
Raha mampiasa rindrambaiko tsy ara-dalàna ianao dia afaka miatrika olana maro be avy eo. Etsy ambany, holazaiko anao ny momba ireo matotra indrindra. Manantena aho fa aorian'ity dia tsy hampiasa rindrambaiko ara-dalàna fotsiny ianao.
Tsy ara-dalàna ny fampiasana Pirated Software
Raha misintona kinova tsy ara-dalàna maimaim-poana Adobe Bridge na rindrambaiko tsy ara-dalàna hafa ianao, dia mety ho lasa lasibatry ny mpanao heloka bevava amin'ny cyber ianao ary hahazo fitoriana noho ny fanitsakitsahana ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona. Mitranga izany satria mandany vola sy fotoana be amin'ny vokatra vokariny ilay orinasa an-dàlam-pandrosoana hahazoana fahombiazana. Tsy avelan'ny orinasa hamotika ny orinasa ny olona mangalatra ny rindrambaiko. Arak'izy ireo araka izany ny fanarahan-dalàna an'ireo mametraka azy tsy ara-dalàna ary avy eo mitory azy ireo. Manoro hevitra anao aho mba tsy hifaneraserana amin'ny rindrambaiko tsy ara-dalàna satria ho lafo folo heny kokoa ny mividy kinova ofisialin'ilay rindrambaiko toy izay mandoa onitra amin'ny fampiasana tsy ara-dalàna.
Misy foana ny fahafaha-mitondra otrikaretina amin'ny PC-nao amin'ny virus isan-karazany
Betsaka ny mpampiasa no tsy mahatsapa akory fa rehefa mametraka rindrambaiko tsy ara-dalàna amin'ny solosain'izy ireo avy amin'ny tranonkala tsy fantatra izy ireo dia avelany hisy viriosy maro hiditra ao amin'ny rafitr'izy ireo ary hanimba azy io. Amin'ny tranga mety indrindra, dia viriosy dokam-barotra vitsivitsy ireo. Na izany aza, mety hisy ihany koa ny fisian'ilay rakitra torrent hanana Trojan na koa fisie iray manome fidirana feno ho an'ireo mpijirika amin'ny data-nao manokana. Raha tsy te-hametraka loza ianao, alaivo rindrambaiko ara-dalàna fotsiny.
Tsy misy ireo fanavaozana ao amin'ny kinova piraty
Mila fanavaozana sy fanatsarana ny programa rehetra. Ny kinovan'ny rindrambaiko ihany no afaka manolotra an'io rehefa mifehy ny vokatra izy ireo ary manandrana manatsara azy amin'ny fotoana rehetra. Na izany aza, mila mahatsapa ianao fa dingana sarotra tokoa izay mitaky matihanina marobe hiasa amin'izany ary tokony homena karama amin'ny asany izy ireo. Noho izany, raha mividy kinova rindrambaiko manana fahazoan-dàlana ianao dia tsy hiatrika olana. Ny endri-javatra vaovao sy ny fanavaozana rehetra dia hatao ho azy ao amin'ny programa ary hanana ny alàlan'ny fanohanan'ny mpanjifa koa ianao raha sendra misy lesoka. Na izany aza, raha mampiasa ny rindrambaiko voajirika amin'ilay rindrambaiko ianao dia tsy hahazo an'izany.
Raha toa ka tsy tianao hampiasa an'ity rindrambaiko ity ny antony iray ary te hanandrana safidy maimaim-poana Adobe Bridge ianao dia zahao ny lisitra etsy ambany ary azonao antoka fa hahita programa mifanaraka amin'ny tianao.
Vakio ny momba ny Solon'anarana Adobe Creative Cloud.
1. MP XnView
Mampiasà MP-XNVIEW MP MAIMAIMPOANA
Azonao atao ny mampiasa azy amin'ny macOS, Linux ary Windows
Manohana endrika sary maherin'ny 500
Manome fitaovana fanovana sary tsotra
Tsy sarotra ny miverina miverina sy mijery ny fanahafana
Fikarohana voafetra amin'ny metadata
Maimaim-poana ho an'ny fampiasana manokana
XnView MP dia safidy malalaka malalaka an'ny Adobe Bridge. Mora ampiasaina ary miasa haingana be. Ny programa dia manohana endrika endrika 500 mahery ary manondrana efa ho 70 endrika. Ho fanampin'izany, ity rindrambaiko ity dia manana interface tsotra izay mora miasa tokoa. XnView MP dia manolotra asa fanovana sary fototra, ao anatin'izany ny jiro, loko, fiolahana ary fanitsiana haavon'ny. Ankoatr'izay, any ianao dia hanana fidirana amin'ny endri-javatra fanodinana batch mety. Miaraka amin'ny fanampiany, ianao dia afaka mamadika rakitra avy amina endrika iray mankany amin'ny iray hafa ary manome anarana azy rehetra avy hatrany.
Mampiasà IRFANVIEW MAIMAIMPOANA
Haingam-pandeha sy maivana tokoa
Manome fitaovana fanovana sary fototra
Manohana endrika endrika be dia be
Ny fisian'ny fanodinana batch
Manohana plug-in an'ny antoko fahatelo
Safidy 'fametrahana dia mety ho tsy intuitive ho an'ny mpampiasa manomboka
IrfanView dia safidy hafa maimaim-poana Adobe Bridge. Izy io no rindrambaiko fitantanana sary antoko fahatelo be mpampiasa indrindra eny an-tsena ary mendrika izany fahombiazana tanteraka izany. Voalohany indrindra, maivana ny programa ary tsy dia mitaky toerana malalaka amin'ny fitaovanao, izay mety indrindra ho an'izay rehetra mampiasa Windows. Ary koa, ity rindrambaiko ity dia manohana endrika endrika be dia be ary manolotra fampiasa maro ho anao hijerena mora foana ny sary sy hanao fanovana sary tsotra. Ho fanampin'izany, ity rindrambaiko ity dia manohana ny fikirakirana sary raha toa ka mila mampihena ny enta-mavesatra ianao rehefa miasa miaraka amina sary maro miaraka. Na izany aza, ny tombony lehibe an'ny IrfanView dia ny fanohanany ireo plug-in an'ny antoko fahatelo. Hanome anao singa bebe kokoa aza izy ireo nefa tsy mila mandoa vola fanampiny.
3. Mpijery sary FastStone
Mampiasà FASTSTONE MAIMAIMPOANA
Fitaovana maro be ho an'ny fanovana sary tsotra
Mety amin'ny fampitahana sy fanasokajiana sary maro
Manome ny fanaraha-maso keyboard tsara indrindra
Tsy fahampian'ny naoty sary
Mety ho miadana tsindraindray
FastStone no safidy malalaka an'ny Adobe Bridge manaraka. Na dia manohana endrika kely kokoa noho ny programa hafa mitovy aminy aza ity rindrambaiko ity dia mbola manana ny toerana ambony eo amin'ny tsena ihany izy io. FastStone mirehareha interface tsotra izay ahafahanao mijery sary maromaro ary manitsy azy ireo avy hatrany. Ary koa, ity rindrambaiko ity dia manolotra fitaovana fanovana sary be dia be. Izy io dia manohana ny fanodinana batch amin'ny famadihana sy ny fanovana anarana ny rakitra, famoronana sary an-tsehatra miaraka amin'ny effets de transition mihoatra ny 150 mahafinaritra sy ny fanohanana mozika, manome ny fahafaha-maka sary. Ny tombony lehibe indrindra amin'ny rindrambaiko dia ny fahazoana fanavaozana tsy tapaka miaraka amin'ny fanohanana endrika maro kokoa sy fiasa vaovao.
Sintomy ny Adobe Bridge Free
Sintomy maimaim-poana ny Adobe Bridge
Sintomy maimaim-poana ny Adobe Bridge ary afaka hiara-hiasa amin'ireo mpitantana fananana matanjaka indrindra ianao. Izy io dia ahafahanao mijery, mandamina, manova ary mizara fananana mamorona maromaro avy hatrany. Ankoatr'izay, amin'ny alàlan'ny fanampiany dia azonao atao ny miara-miasa amin'ireo tranomboky samihafa sy mamoaka ny sarinao ao amin'ny Adobe Stock mahitsy avy eo Bridge.
Tombontsoa azo avy amin'ny Adobe Bridge